Ideas & Plans » ဆြာ ကြောင်ဂျီး သို့	26
@QUIL@ says: ဖတ်လို့ ကောင်းပြီး ဟုတ်သလိုလိုတော့ ရှိသား…
နံပါတ်နှစ် တွေလည်း အသီးသီး ရှိပြီးသား။လူကိုတည်ပြီး ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အုတ်မြစ်မဟုတ်။ ဘွားတော်ကို လေးစားတယ် ကြည်ညိုတယ် ထောက်ခံတယ်။ ဒါကတပိုင်း။
မြစပဲရိုး says: ဒီတစ်ခါ စာထဲမှာ ပါတဲ့ အတွေးအခေါ် အသုံးအနှုံး တစ်ချို့ က မနာလို ဖြစ်လိုက်မိ တဲ့ အထိ မြင့်ပါတယ်။
အလုပ်လုပ်တာ မှ သူ့ဘဝ ကို အဲဒီမှာ မြှပ်ထားတာ။ သူ့ အကျိုးမပါ။ ပြီး ခဲ့တဲ့ လ ကဘဲ ပြင်ပ မှာ တက္ကသိုလ် ဆရာမ လုပ်ပြီး အဲဒီမှာ အတော်လေး နာမည်ရနေတဲ့ သူငယ်ချင်းညီမလေး မြန်မာပြည် ကို အပြီးပြန်သွားတယ်။
သူဘာမှ မလုပ်ပါဘူး။ (သူ့နာမည် ပေါ်အောင်လို့) အခု ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ Management စွမ်းအား နဲ့ တိုင်းပြည် ထူထောင်နည်း တစ်စ ကို တစ်ရစ်စီ မြင်လို့ရ နေပြီ။
မြစပဲရိုး says: ကျန်သေးတယ်။
Ma Ma says: အရမ်း အရမ်း အရမ်းကို ကောင်းတာပါပဲရှင် ……….. အလုံးစုံ သဘောတူ ထောက်ခံလို့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေကို အားကျပြီး ပြောရရင် ပါးစပ်ဆယ်ပေါက်ရှိတောင် ပြောလို့ မလောက်ပါဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပြောချင်တဲ့သူ ကြိုက်သလောက်ပြော
kai says: ပြီးခဲ့တဲ့.. ၂လလောက်က.. စုဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာပြည်ဝင်တယ်..။
ဦးကြောင်ကြီး says: ခမြှားက တီတီလော်ဘမြီကို ကလံဒါလား… မခမ့်၎ဆားနဲ့…။ လူကြည့်ဒေါ့ ပုတ်သေးရမ်း..
မင်း ခန့် ကျော် says: ဒေါ်စုကို
kai says: လုပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်…
မင်း ခန့် ကျော် says: ကောင်းပါတယ်သူဂျီးရေ။
မြစပဲရိုး says: မနောက်ပါနဲ့ ကိုမင်းလေး ရယ်။
ကျွန်မ ကတော့ ဒီနေရာမှာ လဲ ကွန်တစ် စစ်စစ်ကြီးပါဘဲ။ . ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာရချိန် အသံဝဲ နေသူ တွေ လဲ အသံပြန်ကောင်းသွားကြ မယ် လို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
မင်း ခန့် ကျော် says: us လို အခြေကြီးတဲ့နေရာမှာတောင်
kai says: ယူအက်စ် ဆင်းရဲသားနဲ့တော့ .. မြန်မာကသိပ်နှိုင်းလို့မရ…။
မင်း ခန့် ကျော် says: kai says:
kai says: မြန်မာလူထုကတော့ နှစ်၁၀၀ မပြော ၁နှစ်အတွင်း us နီးပါး မျော်လင့်နေပုံ
မြစပဲရိုး says: ကိုမင်းခန့်ကျော် ရဲ့ ဆိုရှယ်လစ် ပုံစံ ဖြစ်ချင်တာ ခေါင်းထဲ ရောက်ပြီး စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။
kai says: အိုဘားမားရဲ့..ကျမ်းမာရေးအာမခံစနစ်အောင်မြင်ပါတယ်..အရီးလတ်ရဲ့..
မင်း ခန့် ကျော် says: ကျတော့်ဆိုလိုရင်းကို နားလည်ပေးလို့
Mike says: ဥရောပမှ မေ့မရနိုင်သော ပုံရိပ်တစ်ခု
Ma Ma says: ကိုယ်တိုင်ဆုံတွေ့ခွင့်ရသူတွေရဲ့ အပြုံးတွေ စကားသံတွေ ကြားရပြီး ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူးချင်လှတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
@QUIL@ says: ကောင်းပါလေ့ဗျာ ….
မြစပဲရိုး says: “မ” လေး တစ်လုံးထဲ ကို ဘဲ မြ ဖျက်လိုက် မိတာ ပါ ဆရာလေး ရယ်။
မင်း ခန့် ကျော် says: ဟိုသီချင်းလေးသတိရသားးးး
Alinsett @ Maung Thura says: ဒီရွာထဲမှာ အရီးမြ နှစ်ယောက်မလိုဘူး။
Swal Taw Ywet says: မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်ကနေဘဲ Copy ယူဖြည့်နေကြတော့ ရွာ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်တွေ လျော့သွားသဗျ။
မင်း ခန့် ကျော် says: အစိတ်သားကိုဖိမဟဲ့ဆိုတာထက်
ကိုနေတိုးဆီ ရီပို့ တက်လိုက်ယုံ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.